Walitti hidhamiinsa gabaatiif xiyyeeffannaa
Bu'aan misooma dinagdeefi hawaasummaarraa argamu babal'ina carraa hojiifi haala jireenyaa lammiileetiin ibsa. Keessumaa gama dargaggootaaf carraa hojii uumuutiin xiyyeeffannaan addaa kennamee tattaaffiin taasifamaa jiraachuun ifaadha.
Hojiin gama hiyyummaafi hoji dhabdummaa hir'isuutiin hanga ammaatti raawwatame ifatti qindaa'ee taa'uu baatus haala harca'eenis ta'u carraaqqii hanga ammaatti taasifameerraa ka'amee muuxannoo gaariifi hanqina jirurratti xiyyeeffatanii hojjechuun dhimma kutattummaa gaafatuudha.
Tattaaffii hanga ammaatti taasifameen keessumaa lammiin hojii argate hiyyummaa keessaa ba'uuf carraaqqii jiru kan agarsiisu waan ta'eef gama carraa hojii uumuutiin bu'aaleen lakkaa'amuu danda'an galmaa'aa akka jiraniidha kan ibsamu.
Ammas taanaan hiyyummaafi hoji dhabdummaan bal'inaan waan jiraniif karoorawwan tarsiimoottis ta'e baroota bajataatiin qooduun guddina si'aayina qabu ittifufsiisuuf dhimmoota ijoo kanneenirratti xiyyeeffannaadhaan hojjechuu barbaachisa.
Carraa hojii bal'inaan uumuun manii hiyyummaa hir'isuu ALA hanga bara 2030tti gara dhibbantaa 16tti gadibuusuuf qabame milkeessuuf kan gargaaru waan ta'eefis yeroo kamuu caalaa dhimmamanii hojjechuu gaafata.
Ragaalee adda addaarraa hubachuun akka danda'amutti baadiyaatti hangi dhabiinsa hojii hir'ataa dhufeera. Magaalotattis hojiileen rakkina kana salphisan geggeeffamuu qabu. Kanaafis keessumaa qonni ammayyaafi misoomni industirii maanufaakchariingii qooda guddaa waan qabaniif kutattummaadhaan irratti hojjetamuu qabu.
Kana maddiittis invastmantii dhuunfaa jajjabeessuun, intarpiraayizoota maakroofi xixiqqaa babal'isuun, hojiilee misoomafi eegumsa qabeenya uumamaa carraa hojii uumuutiif fayyadamuufi sagantaalee misoomaa mootummaadhaan gaggeeffaman fa'irratti carricha hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uun fudhatama argatee irratti hojjetamuu qaba.
Tattaaffiin carraa hojii bal'aa uumuuf taasifamaa jiru maddiisaattis rakkoo gabaafi iddoo hojii dargaggoonniifi qonnaan bultoonni yeroowwan adda addaa kaasaa jiranirrattis xiyyeeffannaan hojjechuun barbaachisaadha.
Keessumaa dargaggoonni waldaadhaan gurmaa'anii hojiitti seenan rakkoon gabaafi dhabiinsi bakka hojii sochiisaaniirratti gufuu ta'aa jiraachuu kaasaa waan jiraniif akkuma carraa hojii uumuu dhimmoota kanneenirrattis xiyyeeffannaan hojjechuun kan boruuf beellamamu ta'uu hinqabu.
Ministirri Muummee Hayimamaariyaam Dassaalany tibbana oggaa qonnaan bultoota Naannoo Amaaraa wajjin mariyatan akka jedhanitti, rakkoo walitti hidhiinsa gabaa qonnaan bultootaa furuun kan danda'amu omishaalee qonnaa gara industiriiwwan qindeessaatti ceessisuudhaani.
Muuxannoofi kallattii kana gara dargaggoota magaalotatti waldaaleedhaan gurmaa'anii hojiisaanii haala gaariidhaan geggeeffachuun bakka hojiifi gabaa dhabuun rakkataa jiraniitti walitti hidhamiinsa gabaa uumuufiirratti xiyyeeffannaan hojjechuun murteessaadha.
Torban kana/This_Week 43547
Guyyaa mara/All_Days 1468327